Sheekh Axmed Cabdi Dhicisow oo Xalay Ku Geeriyooday Muqdisho | RBC Radio	Home
Wednesday, September 5th, 2012 at 04:52 am	/ 4 Comments Saturday, September 8th, 2012 at 12:57 pm Sheekh Axmed Cabdi Dhicisow oo Xalay Ku Geeriyooday Muqdisho
Muqdisho (RBC) Waxaa xalay magaalada Muqdisho ku geeriyooday Sheekh Axmed Cabdi Dhicisow oo ahaa gudoomiyaha Majmaca Culimada Soomaaliyeed, sida ay xaqiijiyeen eheladiisa.
Sheekh ayaa sida ay sheegeen xubno qoyskiisa ka mid ah caafimaadkiisu aad u liitay beryihii u dambeeyay oo uu la xanuunsanayey cudurka Dhiigkarka. Habeenkii xalay saqdii dhexe ayaa la sheegay in si kedis ah loogu soo booday kadibna uu geeriyooday isagoo ku sugnaa gurigiisa.
Maanta ayaa lagu wadaa in lagu aaso magaalada Muqdisho meydka marxuumka.
Allah ha u naxariistee Sheekh Axmed Cabdi Dhicisow wuxuu ka mid ahaa ardeyda afka Carabiga wax ku bartay ee dugsiyadii Allaahida ka baxay isagoo markii dambana helay waxbarasho heer jaamacadeed o culuumta Islaamka ah.
Sheekh Dhicisow waxaa lagu xusuustaa muxaadarooyin iyo hadalo uu ka jeediyey idaacadaha gudaha isagoo ka mid ahaa culimadii sida weyn u diiday ururka Al-Shabaab oo dagaalo la galay DKMG ah. Sanadihii uu xukunka hayey Madaxweyne Shariif wuxuu Sheekh Dhicisow ka mid ahaa culimada sida weyn ugu dhowaa Madaxweyne Shariif oo illaa hadda ay saaxiibo ahaayeen.
Marxuumka wuxuu ka tagay xaasas iyo carruur aan tiradooda helin. Allah ha u naxariisto Sheekh Axmed Cabdi Dhicisow.
Tags: Sheekh Axmed Cabdi Dhicisow oo Xalay Ku Geeriyooday Muqdisho	1 Response for “Sheekh Axmed Cabdi Dhicisow oo Xalay Ku Geeriyooday Muqdisho”
Omar says:	September 8, 2012 at 2:23 pm	ALLAH YAR XAMU A RAXIMIN!.